အထီးကျန်ခြင်းနှင့်၎င်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှု — Steemit
လူတိုင်းဖြစ်နိုင်ကမ္ဘာကြီးတစ်ခုလုံးကိုတစ်ဖန်မြို့ရိုးကိုနောက်ကွယ်မှဖြစ်ဟန်အခါ, အထီးကျန်ခံစားချက်သိတယ်: တဦးတည်း, အခြားဘက်မှာကလူကိုမြင်ရအပြန်အလှန်သူတို့ကိုစကားပြော, တစ်ဦးထက်ပိုသောသို့မဟုတ်ထိုထက်နည်းပုံမှန်အသက်ရှင်နေထိုင်ဘဝ-ပေမယ့်တစ်ဦးတည်းခံစားရနှင့်တစ်နေရာရာနက်ရှိုင်းသောမေ့လျော့နိုင်ပါတယ် အတွင်းအပြင်။ ဆက်သွယ်ရေးသစ်ကို အပြုအမူတွေကိုကျန်းကျန်းမာမာနှင့်သာမန်ယူဆနေကြသည်ရှိရာဘုရား, အဘယ်မှာအရာအားလုံးလူတယောက်အုပ်စုပိုင်ဖို့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးကိုခေါ်ရှိရာကမ္ဘာမှာတော့ဖြစ်ခြင်းများနှင့်တစ်ဦးတည်းခံစားမကြာခဏမှားယွင်းနေပုံရသည်။ အထီးထီးနေခြင်းလိုအပ်နေအတွက်မကောင်းတဲ့ဘာမျှမရှိ၏ အခြိနျမှနျမှကြှနျုပျတို့အားလုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အပေါ်အချို့သောအချိန်ဖြုန်းဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ သို့သျောလညျးအထီးထီးနေခြင်းမဟုတ်ဘဲတစ်ဦးမိမိဆန္ဒအလျောက်ရှေးခယျမြှုဖြစ်၏ ဒီအခွအေနေနာတာရှည်နှင့်နှစ်လိုဖွယ်ကောင်းသောဖြစ်လာသည့်အခါလူတစ်ဦးတခြားသူတွေနဲ့အဆက်အသွယ်ထူထောင်၏မဖြစ်နိုင်ခံစားရသည့်အခါ, ဤပြီးသားကမ္ဘာတဝှမ်းများစွာသောလူပြင်းပြင်းထန်ထန်ကိုကွောကျရှံ့ရာတစ်ခုခုသည်: ဤအထီးကျန်ဖြစ်ပါတယ်။
အထီးကျန်အတိအကျကဘာလဲ? တစ်ဦးကပိုပြီးကျဉ်းမြောင်းချက်နှင့်အဓိပ္ပါယ်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးကအခြားလူများကဝိုင်းရံမရသောအခါအထီးကျန်အခြေအနေကိုကြောင်းအကြံပြုတစ်ယောက်တည်းသူသို့မဟုတ်သူမ၏အချိန်အများစုကိုသုံးစွဲနှင့်အနည်းငယ်သာ--မျှလူမှုရေးအဆက်အသွယ်ထိန်းသိမ်းထားသည်။ သို့သော်မည်သူမဆိုသူကိုအနည်းဆုံးတစ်ကြိမ်အထီးကျန်၏အခြေအနေကြောင့်မိတ်ဆွေများကသို့မဟုတ်မိသားစုကဝိုင်းခံရဖို့ဖြစ်နိုင်ခြေကြောင်းကိုသိတယ်အမှုအရာများ၏ထူနေနှင့်နေဆဲအထီးကျန်ခံစားရကြုံတွေ့ခဲ့ရသည်။ တကယ်တော့ခုနှစ်, စာရင်းဇယားအထီးကျန်ခံစားရသူတွေကိုခန့် 60% လူမှုရေးဆက်သွယ်မှုများနှင့် \_ သို့မဟုတ်ဆက်ဆံရေး၏ပမာဏနှင့်အမျိုးမျိုးသေချာပေါက်မကယ်တင်ဘူးကြောင်း, အထီးကျန်ပတ်ဝန်းကျင်အပေါ်မူတည်ပါဘူးသောစာတမ်း၏အကောင်းတစ်ဦး၏ပုံဥပမာတည်းဟူသောလက်ထပ်နေကြသည်ကိုပြသ ကနေကျွန်တော်တို့ကို။
အထီးကျန်တဲ့ပိုကောင်းတဲ့နားလည်မှုတစ်ခုကို-သို့မဟုတ်တိကျသောဖြစ်နောက်ကွယ်မှရပ်နေသည်ကိုလိုအပ်ချက်များနှင့်အလိုဆန္ဒများ၏ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဤလိုအပ်ချက်များကိုကျေနပ်အောင်ဖို့မဖြစ်နိုင်အောင်မြင်နိုင်ပါသည်။ အဆိုအရတိုင်းလူတစ်ဦးတစ်အချို့သောအုပ်စုပိုင်တစ်ဦး၏အခြေခံလိုအပ်ချက်ရှိပါတယ်; ဒီလိုအပ်ချက်, စားရန်အိပ်, သို့မဟုတ်လုံခြုံဟုခံစားရရန်လိုအပ်ကြောင်းအဖြစ်သိသာနှင့်သဘာဝဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော်ရိုးရိုး၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်အပေါ်ပိုင်ဆိုင်လိုအပ်ကြောင်းကျေနပ်အောင်မထားဘူးသာဤကိစ္စတွင်အတွက်ပိုင်ဆိုင်၏အဓိပ္ပာယ်အပြည့်အဝရှိလိမ့်မည်: ကပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးအားဖွဲ့စည်းရန်နီးစပ်နှင့်တည်ငြိမ်လူ့ဆက်ဆံရေး, သူတို့ထိနျးသိမျးထားနိုငျအရေးကြီးပါသည်။ ဤသည်ကိုပင်အမြင်များ၏ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်အချက်အနေဖြင့်သဘာဝကျပါတယ်: အခြားလူများနှင့်အတူတည်းခိုရှေးခတျေရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာရှင်သန်ရပ်တည်ရေး၏အာမခံချက်ဖြစ်ခဲ့သည်။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ (သို့မဟုတ်အခြေခံ) လိုအပ်ချက်များကိုအကြားအပြိုင်ဆက်လက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အလောင်းတွေကိုမကြာခဏကြှနျုပျတို့၏စိတျပညာထက် သာ. ပညာရှိပါသည်: တစ်မရှိခြင်းသို့မဟုတ်အရာတစ်ခုခုကိုတစ်ပိုလျှံလည်းမရှိသည့်အခါ, ကျွန်တော်တို့ရဲ့အလောင်းတွေသင့်လျော်စွာတုံ့ပြန်။ (ထိုကဲ့သို့သောဒါအပေါ်ငတ်မွတ်ခေါင်းပါးမှု, အပူနှင့်ကဲ့သို့) အာရုံနှင့်စိတ်ခံစားမှုကျွန်တော်တို့ရဲ့အလောင်းတွေကဤရှားပါးမှုနှင့်ပိုလျှံအကြောင်းကိုသူတို့ကိုသတိပေးနိုင်ရန်အတွက်ကြှနျုပျတို့၏စိတျမှပေးပို့သည့်အချက်ပြမှုများဖြစ်ကြသည်။ အသီးသီးအထီးကျန်ကျနော်တို့ လိုချင်ကြောင်းကျနော်တို့ကဆက်ဆံရေး (သို့မဟုတ်ပြီးသားရှိပြီးသားဆက်ဆံရေး၏အရည်အသွေး) ရတဲ့ကြသည်မဟုတ်ကြောင်းပိုင်၏လိုအပ်မှုကိုစိတ်ကျေနပ်မှုမပေးကြောင်းအချက်ပြလိုက်ခြင်းရာတစ်ခုစိတ်ခံစားမှုဖြစ်ပါသည်, သို့မဟုတ်။ ဤသည်ကိုမကြာခဏအဓိပ်ပါယျမရှိသောပုံရသည်: ဥပမာ, ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးမိတ်ဆွေတွေအများကြီးရှိသည်နှင့်မကြာခဏသူတို့ကိုကြည့်ရှုနိုင်, သူသို့မဟုတ်သူမလက်ထပ်နှင့်ကလေးများရှိနိုင်ပါသည်, အလုပ်-အရာအားလုံးမှာလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေနဲ့မျှပြဿနာများရှိသည်ထင်ရသောကောင်းပါတယ်, ဒါပေမယ့်အထီးကျန်၏အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါသည် ရှိနေတုန်းပဲ, ထိုသို့ချို့တဲ့ဘာကြောင့်ပစ္စုပ္ပန်သည်အဘယ်ကြောင့်နားလည်ရန်အရေးကြီးပါသည်။
ခိုင်ခံ့နှင့်နီးစပ်ဆက်ဆံရေးအတွက်ဖြစ်ခြင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ကျန်းမာရေးအကျိုးရှိစွာအပေါ်သက်ရောက်မှု; အချိန်ကြာမြင့်စွာကာလအတွက်တစ်ဦးတည်းဖြစ်ခြင်း, အနုတ်လက္ခဏာအကျိုးဆက်များတစ်အရေအတွက်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ဇီဝကမ္မအဆင့်ဆင့်အပေါ်နှစ်ဦးစလုံးဦးဆောင်လမ်းပြပေးနိုင်သည်။ အထူးသဖြင့်, အထီးကျန်ဆန်, (၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်အပေါ်တစ်ဦးအန္တရာယ်ရှိတဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအခြေအနေဖြစ်ပါသည်) ကိုစိတ်ကျရောဂါမှမျှော်လင့်ချက်မဲ့, အနိမ့် -လေးစားမှုတစ်ခုလူမှုရေး ကများနှင့်အလုပ်ချို့ယွင်းနိုင်စွမ်းသတ်သေသဘောထားတွေကို, ဆင်းရဲသားကိုအိပ်စက်ခြင်း, ရှုံးနိမ့်ရဲ့အသိတစ်ဦးခံစားချက်ဦးဆောင်လမ်းပြနိုင်, နှင့်အကူအညီမဲ့။ ဤရွေ့ကားအာရုံတစ်ဦးဆိုးစက်ဝိုင်း-ပြုစုပျိုးထောင်ခြင်းတစ်ဦးချင်းစီကတခြားဖွဲ့စည်းရန်, သူတို့ကသူသို့မဟုတ်သူမ၏ကိုယ်ပိုင်ပေါ်မှာဤ ထဲကရတဲ့အနေဖြင့်သူ့ကိုသို့မဟုတ်သူမ၏ကာကွယ်ပေးနိုင်တဲ့အထီးကျန်လူတစ်ဦး၏အခွအေနေပိုမိုဆိုးရွား။
စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနယ်ပယ်, ဒါပေမယ့်လည်းကိုယ်ထင်ရှားလုပ်ဆောင်ချက်များကိုအထီးကျန်ကြောင့်ထိခိုက်နေကြသည်သာ။ လေ့လာရေးအထီးကျန်ကလူကိုပိုပြီးမကြာခဏအခြားလူများနှင့်အတူခိုင်မာသောနှင့်တည်ငြိမ်ဆက်ဆံရေးခံစားတွေထက်နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာရောဂါများကိုရင်ဆိုင်ရကြောင်းပြသ; သည်အခြားဆိုးကျိုးများအလေးချိန်၏ဆုံးရှုံးမှု, ဟော်မုန်းမညီမျှမှု, ကိုယ်ခံစွမ်းအားစနစ်, ရောဂါကူးစက်မှုများနှင့်ရောင်ရမ်းခြင်းမှအနိမ့်ခုခံရေး, (အသက်ကြီး၌) စိတ်ဖောက်ပြန်နှင့်အရိုးပျက်စီးခြင်းနှင့်ကြွက်သားတစ်သျှူး တားစီးပါဝင်သည်။ ဤအမှုအလုံးစုံတို့ကိုပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးအပေါငျးတို့သညျဤဆိုးကျိုးများကိုသူသို့မဟုတ်သူမအထီးကျန်ခံစားရအခါတိုင်းကြုံနေရစတင်သည်ဟုမဆိုလိုပါ; သို့သော်ဤသက်ရောက်မှုကြာရှည်အထီးကျန် "နာတာရှည်" အထီးကျန်နေစဉ်အတွင်းစုဆောင်းမိ; ထို့ကြောင့်ကြောင့်တဦးတည်းရဲ့ကိုယ်ပိုင်ပေါ်မှာဤအခြေအနေနှင့်အတူကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းနှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အကူအညီကိုရှာဖို့မကြိုးစားရန်အရေးကြီးပါသည်။
#loneliness #effects #life